आँधी प्रभावितका लागि बर्खा अगावै घर बनाउने जिम्मेवारी सेनालाई
त्रिभुवन विमानस्थलबाट ६ केजी सुनसहित चार भारतीय पक्राउ
काठमाडौं– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट करीब ६ किलोग्राम सुनसहित चार जना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। थाइ लायन एयरवेजको बैंकक उडानबाट आएको उक्त परिमाणको सुन प्रहरीले बिहीबार बरामदa गरेको हो। विमानस्थल
१५ औं बर्षीय योजना देशको पहिचान बदल्ने दस्तावेज : प्रधानमन्त्री ओली
यस्तो छ ३ दिनको मौसम पूर्वानुमान, पानी पर्ला ?
काठमाडौँ – पूर्वमा बनेको न्यून चापीय रेखा र स्थानीय वायुको प्रभावले आगामी तीन दिनसम्म देशभरि नै बदली रही अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । गए
नेपाली सेनाबारे भारतमा खतरनाक दुस्प्रचार : किन दुख्यो भारतको टाउको ?
काठमाडौं- हत्या आरोप लागेका तपस्वी रामबहादुर बम्जन विदेश भाग्ने तयारीमा रहेको खुलासा भएको छ । बम्जन निकट स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार उनी पुर्वी एसियाका देशमा जाने तयारीमा छन् । उनिमाथी पांच
विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकताः प्रचण्ड
एक वर्ष अघि धरौटीमा रिहा भएका व्यवसायी सुधीर बस्नेत फेरि पक्राउ
काठमाडौं– घरजग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेत सहकारी ठगी र संगठित मुद्दामा पक्राउ परेका छन्। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोली बस्नेतलाई भिमसेनगोलास्थित घरबाट बुधबार बेलुका पक्राउ गरेको हो। उनी पक्राउ परेको काठमाडौं
अधिनायकवाद आयो भनेर जनतामा भ्रम नछर्न काँग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको चेतावनी
प्रहरीभित्र गम्भीर बदमासी : २/४ जनाको स्वार्थले संगठनकै बद्नाम !
काठमाडौं – सुरक्षा संयन्त्र र निकायहरूले उद्देश्य मूलतः शान्तिसुरक्षा, अमनचयन र कानूनी शासनको प्रत्याभूति गराउनु हो । तर, महत्त्वपूर्ण सुरक्षा अंग नेपाल प्रहरीभित्र केही व्यक्तिको स्वार्थ र षड्यन्त्रका कारण पूरै